ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းထဲကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Opinions သိမ်းဆည်းထားပါရန်
သင်ကလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုနားထောငျ - ကသတင်းထောက်များကိုဖြစ်သင့် ရည်မှန်းချက် နှင့်တရားမျှတ။ တချို့က သတင်းအဖွဲ့အစည်းများ တောင်မှသူတို့ပြိုင်ဘက်ထက်ပို "တရားမျှတပြီးမျှတတဲ့" ဖြစ်ကြောင်းဟုဆိုကာ, သူတို့ရဲ့ကြွေးကြော်သံတွင်ဤဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါပေမယ့်ကားအဘယ်သို့ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန် ?
ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျခဲတဲ့သတင်းကိုဖုံးအုပ်ထားသောအခါသတင်းထောက်တွေကိုသူတို့၏ဇာတ်လမ်းများအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေကို, ဘက်လိုက်မှုသို့မဟုတ်အစွဲဖော်ပြမကိုဆိုလိုသည်။ သူတို့ကအားဖြင့်ဒီလိုဆောင်ရွက် ပုံပြင်များရေးသားခြင်း သုံးပြီး ဘာသာစကားတစ်ခုကို ကြားနေသည်နှင့်ကောင်းသောသို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိလူများသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများ characterizing ရှောင်ပါ။
ဒါပေမယ့်အဘို့ စတင်သတင်းထောက် ရေးသားလေ့ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာစီစာကုံး သို့မဟုတ်ဂျာနယ် entries တွေကိုပြုလုပ်ဒီလိုလုပ်ဖို့ခက်စေနိုင်ပါတယ်။ သတင်းထောက်တွေကိုစတင်တစ်ခုမှာထောင်ချောက်ထဲသို့ကျ adjective နာမဝိသေသနများ၏မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ adjective နာမဝိသေသနကိုအလွယ်တကူအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးတဦးတည်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
ရုံ "သတ္တိ" နှင့် "မတရားတဲ့" ဆိုသောစကားကို အသုံးပြု. စာရေးဆရာလျင်မြန်စွာဇာတ်လမ်းအပေါ်သူ၏ခံစားချက်များကိုပါးလိုက်ပါတယ် - ဆန္ဒပြသူတွေသတ္တိဖြစ်ကြပြီးပဲသူတို့အမှုကိုအတွက်အစိုးရကမူဝါဒများမှားယွင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, Hard-သတင်းသတင်းထောက်တွေကိုများသောအားဖြင့် အသုံးပြု. ရှောင်ရှား adjective နာမဝိသေသန သူတို့၏ဇာတ်လမ်းများ၌တည်၏။
မကြာခဏပိုပြီး - - အရှိဆုံးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှစသောသူတို့အားမတူညီသောရှုထောငျ့မဆိုအကြမ်းဖျင်းညီမျှအာကာသပေးထားသင့်ကြောင်းတရားမျှတမှုပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုဖုံးအုပ်ထားသတင်းထောက်တွေကိုနှစ်ဖက်များသောအားဖြင့်ရှိပါတယ်သတိရရမယ်လို့ဆိုလိုတယ် သတင်းပုံပြင် ။
အဆိုပါသတင်းထောက်ဘာသာရပ်အကြောင်းကိုခိုင်ခံ့သောခံစားချက်များကိုနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေသူသည်ပိတ်ပင်မှုကိုထောကျပံ့တဲ့သူနိုင်ငံသားများအင်တာဗျူး, ထိုသို့ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုသင့်ပါတယ်။ သူသည်မိမိပုံပြင်ရေးသားခဲ့သည်သောအခါ, သူနှစ်ဖက်စလုံးကအကြမ်းဖျင်းညီမျှအာကာသပေးခြင်း, တစ်ဦးကြားနေဘာသာစကားမှာနှစ်ဦးစလုံးအငြင်းပွားမှုများဖော်ပြသင့်ပါတယ်။
ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်နှင့်တရားမျှတမှုသတင်းထောက်တစ်ဦးပြဿနာနှင့်ပတ်သက်ပြီးရေးသားခဲ့သည်ဘယ်လောက်မှ, ဒါပေမယ့်သူကဘယ်လောက်မှမသာလျှောက်ထား ကျင်းပ အများပြည်သူအတွက်သူ့ကိုယ်သူ။ တစ်ဦးကသတင်းထောက်ကိုရည်ရွယ်ချက်နှင့်မျှတသောဖြစ်ပေမယ့်လည်းရည်မှန်းချက်တရားမျှတတဲ့ဖြစ်ခြင်း၏ပုံရိပ်တစ်ခုဖော်ပြရပါမည်သာ။
ကျောင်းဘုတ်အဖွဲ့ဖိုရမ်တစ်ခုမှာသတင်းထောက်အငြင်းအခုံနှစ်ဖက်စလုံးမှလူအင်တာဗျူးသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးလိမ့်မည်။ သို့သော်လျှင်, အစည်းအဝေးအလယ်၌ရန်သူသည်တက်ရပ်ပြီးတော့မိမိအယုံကြည်ကိုးစားမှုချိုးဖဲ့သောစာအုပ်ပိတ်ပင်ထားမှုအပေါ်သူ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆ spouting စတင်သည်။ မည်သူမျှသူတို့သူအတိုကောက်ဘယ်မှာသိကြတစ်ချိန်ကသူတရားမျှတပြီးရည်မှန်းချက်နိုင်ပါတယ်ယုံကြည်ပါလိမ့်မယ်။
ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်နှင့်တရားမျှတမှုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာမှတ်မိဖို့အနည်းငယ်အတွက်အသိပေးချက်ရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာဤကဲ့သို့သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုခက်ခဲသတင်းကိုဖုံးအုပ်ထားသတင်းထောက်တွေကိုမ Op-Ed စာမျက်နှာများအတွက်ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်အရေးအသားလျှောက်ထား, ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးအနုပညာအပိုင်းများအတွက်အလုပ်လုပ်။
ဒုတိယအချက်မှာနောက်ဆုံးမှာ, သတင်းထောက်များကိုသမ္မာတရားကိုရှာဖွေရေးအတွက်ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်နှင့်တရားမျှတမှုအရေးကြီးလှသည်စဉ်နှင့်အညီ, သတင်းထောက်သူတို့ကိုအမှန်တရားရှာဖွေတာ၏လမ်းရဖို့မသွားပါစေသင့်ပါတယ်။
သင်တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောစခန်းဝင်နှင့် gaunt ရာပေါင်းများစွာ, emaciated လူများနှင့်အသေကောင်များ၏လိပ်ခေါင်းသက်သေခံ။
သငျသညျ, ဒီသည်မည်မျှကြောက်မက်ဖွယ်အကြောင်းပြောဆိုရန်အမေရိကန်စစ်သားအင်တာဗျူး, ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်, ထို့နောက်ဇာတ်လမ်း၏အခြားဘက်ခြမ်းရဖို့တစ်နာဇီအရာရှိတဦးကအင်တာဗျူးသလား? ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ ရှင်းနေသည်မှာဤဆိုးသောလုပ်ရပ်များကျူးလွန်ခဲ့သောပြီနေရာဖြစ်ပြီး, ထိုသို့အမှန်တရားသိရှိစေရန်သတင်းထောက်အဖြစ်သင့်အလုပ်ပါပဲ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆုံးဖြတ် 8 နည်းလမ်းများ: ဂျာနယ်လစ်များအတွက်
အဆိုပါစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ Student သတင်းစာများအကြားဆက်ဆံရေး
တစ်ဦးမဖြစ်မနေပြန်ကြားရေးသတင်း Lede ရေးထားလုပ်နည်း
တစ်ဦးက Philly အားကစားပရိသတ်များအဘို့လက်ဆောင်: ဒဏ္ဍာရီပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်ဘီလ်လိုင်ယွန်သို့ပြန်သွားရန်ဖြစ်ပါသည်
ဤတွင်စာနယ်ဇင်း Conferences ကဖုံးအုပ်သတင်းထောက်များသည်ခြောက်သိကောင်းစရာများ Are
အဆိုပါစီးပွားရေး၏5ကဏ္ဍ
Diffraction ၏ Huygens '' နိယာမ
ဘောလီဘောလေ့ကျင့်ရေး: Ball ကိုထိန်းချုပ်ရေးတူးဖော်ရေး
21 ရာစုအတွင်းရိုး: Walden ဆဲယနေ့တွင်ကြှနျုပျတို့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်မှာနိုင်သလား?
တေလာဆွစ်ဖ်မှ Country သို့မဟုတ် Pop ဂီတရှိပါသလား?
အဆိုပါထိပ်တန်း Eco-Friendly တီထွင်မှု
Elvis Presley ဆီမှာဆိုရင် Timeline ကို: 1960
Rechazo de la solicitud de la tarjeta က de residencia
Taurus နဲ့ Scorpio မတ်ေတာသအသုံးပြုပုံများ
သင်မည်သို့တစ်ခု RC Dragster Build သလား?
တစ်ဦးစမ်းသပ် constant ဆိုတာဘာလဲ
စစ်အုပ်ချုပ်ရေး gladiator Priscus နှင့် Verus ၏ပုံပြင်ပြောပြ
မက်ကူလော့ v ။ မေရီလန်း
နေ့၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို - jidai